Uluhlu 7.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-7
Amaxesha ama-7 etafile
Itheyibhile ye-7 yitafile eya kuthi isixelele iziphumo zokongeza inani elifanayo kali-7. Le nto sikuxelela yona yile tafile kukuba naliphi na inani eliphindaphindwe ngesi-7 liyakongeza elo nani ukuya kumaxesha asixhenxe
Masibone umzekelo: ukuba sineengxowa ezisi-7 kwaye nganye kuzo sibeka iilekese ezi-3, ke siyakuba no-7 × 3 = 21, kuyafana nokuthi 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21, into esiyenzileyo yongeza u7 umphinda-phinde 3.
Uya kuyisebenzisa le tafile ebomini bakho nanini na ufuna sazi isiphumo samaxesha ama-7 ngesixa. Njengomzekelo wokusetyenziswa singathi ukuba sinesuti ezisixhenxe zexabiso elilinganayo kwaye sifuna ukwazi ukuba zixabise ntoni zonke. Ke itafile ye-7 iya kusisebenzela kule mishini.
Iimpawu zetheyibhile e-7 :
• Le tafile isinika iziphumo zalo naliphi na inani eliphindaphindwe ka-7.
• Le tafile yongeza nje ubungakanani obufanayo amaxesha angama-7 ngendlela yokuba ukuba sifuna ukwazi ukuphinda-phindwa kuka 7 × 4, ingali nani nje eli ngu 7 umphinda-phinde ngo-4, oko kukuthi, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28
• Itheyibhile ye-7 iyakusinceda ebomini bethu, phakathi kwezinye izinto, ukuze sikwazi ukubona nokusombulula iimeko ezininzi, umzekelo ukuba sinamatyala ali-7 alinganayo kwaye nganye kuzo inexabiso leedola ezi-2, emva koko siya kusebenzisa itafile yesi-7.
• Ukuba sineengxowa ezili-7 ezineebhanana ezi-3 inye, siyakuba ne-7 × 3 = iibhanana ezingama-21.
• Ukuba sineebhasikithi ezisi-7 ezinee-apile ezi-5 inye, ngoko ke oko siza kuba nako kuya kuba zizonke ngama-5 + 7 = ngama-apile angama-35.
• Ukuba sineebhaskithi ezi-7 ezineelekese ezi-4 inye, oku kuyakufana no-4 × 7 = 28, sineelekese ezingama-28 zizonke.